GAROOWE: Gobal & Degmooyin cusub oo maalmahan si rasmi ah ugu soo biiraaya Gobalada & Degmooyinka Puntland.
April 8, 2013 5:25 pm GMT - Written by Mukhtar - Edited by Mukhtar
Garoowe(pp)- Sida ay noo xaqiijiyeen ilo-wareedo lagu kalsoonaan karo oo ka agdhaw aqalka Madaxtooyada Puntland waxaa Gobalada Puntland kusoo kordhay Gobal cusub oo la baxay Gardafuul, waxayna xaruntiisa Gobal noqon doontaa Degmada caluula oo Horay uga tirsanayd Gobalka Bari.
Puntland oo soo kordhisay Gobal cusub iyo Degmooyin cusub
Golaha Wasiirada Puntland oo gobalkan lasoo hor dhigay ayey wararku sheegayaan in si rasmi ah ay u meel mariyeen golaha wasiiradu waxaana lagu wadaa in la horgeeyo golaha wakiilada Puntland si ay ugu ansixiyaan Gobal cusub oo gobalada Puntland ka dhigaaya 9-gobal maadama ay horay u ahaayeen 8-Gobal .
Dadka ku dhaqan degaankan loo magacaabay gobalka cusub ayaa si weyn usoo dhaweeyey in degaanadan loo aqoonsado Gobal kamid ah gobalada Puntland.
Dhanka kale Waxaa degmooyinka Puntland lagu daray degmooyin cusub oo kamid noqonaaya Gobalada Mudug iyo Haylaan, Gobalka Mudug ayaa waxaa Degmo cusub loo Magacaabay Degmada Towfiiq, sidoo kale Gobalka Haylaan ayaa waxaa Degmooyin cusub loo Magacaabay Buraan iyo Celaanyo, Waxayna degmooyinka Puntland noqonayaan illaa 40-Degmo maadama ay horay u ahaayeen 37-degmo.
Warkan maahan mid weli si rasmi ah ay Dawladu ugu faafisay warbaahinta hase ahaate warbaahinta Puntlandpost ayaa ka heshay ilo lagu kal soonaan karo waxaana la rajaynayaa in dhawaan si rasmi ah loo baahiyo.
Wixii kasoo kordha kala soco Puntlandpost.com puntlandpost.com